Saamaynta adeegga bulshadu ku leeyahay saxaafadda oo la baarayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Saamaynta adeegga bulshadu ku leeyahay saxaafadda oo la baarayo
La daabacay onsdag 19 juni 2013 kl 10.40
Dowladda Iswiidhen waxay ku talajirtaa in ay baaritaan ku samayso habka ay hawlaha shirkadaha adeegga bulshadu saameeyn ugu leeyihiin suuqa saxaafadda iyo tartanka ka dhexeeya, gaar ahaan wargeysyada iyo qaybo kale oo saxaafadda ka mid ah. Qaar ka mid ah shirkadaha wargeysyada ayaa ku doodaya in shabakadaha shirkadaha adeegga bulshadu ay carqaladayn ku hayaan fursadaha dakhliga ee wargeysyada.
- Waxaan ku talajirnaa in aan dayrta laga bilaabo u xilsaarno hay’ad baaritaan ku sameyso habka ay shirkadaha adeegga bulshadu saamayn ugu leeyihiin suuqa saxaafadda. Sidaas waxaa tiri wasiiradda dhaqanka iyo hiddaha Lena Adelsohn Liljeroth.
Hindisahaani wuxuu qayb ka yahay mooshin ay dowladdu maanta soo bandhigeyso. Hindisahaas oo ku saabsan dhaqaalaha iyo mustaqbalka shirkadaha adeegga bulshadu gaari doonaan xilliga u dhexeeya 2014 iyo 2020. Shirkadahaas adeegga bulshada waxay kala yihiin Sveriges Television, Sveriges Radio iyo Utbildningsradion.
Shirkado saxaafadda oo ay ugu horreeyaan shirkadaha wargeysyada ayaa dhaleecayn kulul ugu soo jeediyey shirkadaha adeegga bulshada habka ay Internet u isticmaalaan. Laakiin baaritaanka ay dowladdu ku talajirto in ay samayso looma macnayn karo in ay dowladdu ayidsan tahay dhaleeceynta shirkadaha wargeysyada.
- Arrintu sidaas maaha. Hay’ad madax-bannaan ayaa u xilsaarnay in soo baarto saamaynta shirkadaha adeegga bulshada iyo habka saamayntooda.
Arrin kale oo ku saabsan laamaha adeegga bulshada oo aad looga doodayey ayaa ahayd khidmadda shatiga telefishanka. Dadkii baaritaanka sameynayey waxay soo jeediyeen in canshuur lagu maalgeliyo, laakiin taas weli ma dhicin. Welina shatigii ayaa la isticmaalaa in kastoo aan khidmaddii la kordhin.
Dhanka kale dowladda ayaa dooneysa in shirkadaha raadiyayaashu iskala shaqeeyaan xagga sancada iyo sidii wararka loogu baahin lahaa hab elektaroonig ah oo internet loo adeegsado. Waxay kaloo dowladdu dooneysaa in ay u magacaabo qof isuduwe arrintaan ka noqda. Haddii ay suurtagal noqotana waxaa dhammaan raadiyayaasha laga siideyn doonaa internet.